ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၃ / ၂၀၁၅ ) အား ထောက်ခံကြိုဆိုခြင်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ကိုယ့်အတတ်ကိုယ်စူးနေသော မြန်မာစစ်အစိုးရ အခု အရူးမီးဝိုင်းဖြစ်နေပြီ
Bogyoke Aung San Movie »
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၃ / ၂၀၁၅ ) အား ထောက်ခံကြိုဆိုခြင်း
Thetka Moe Nyo Pyinmana, Myanmar ·
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၃ / ၂၀၁၅ ) အား ထောက်ခံကြိုဆိုခြင်း
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိဘပြည်သူများသို့
မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားချက် အား တစ်ချက်ခြင်း ထောက်….ခံ ပါမည်၊ ထောက်ခံသောစာသားများကို ကွင်းထဲတွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်၊
၁။ နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့် တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနှင့် လူမှု စီးပွား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး တို့အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာတွင် ပြည်သူများအပိုင်းမှလည်း တာဝန်သိသိဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြ သဖြင့် အောင်မြင်သင့် သလောက် အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့ကြပါသည်။
(မှန်ပါသည်၊ နိုင်ငံတကာတွင် တောင်းကောင်းရုံ၊ ဆန်ရှင်သိမ်းပါဟု ပြောကောင်းရုံအောင်မြင်မှုများရရှိခဲ့ပါသည်)
၂။ တိုင်းပြည် တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိမှသာ ပြည်သူများ စိတ်အေးချမ်းသာစွာဖြင့် နေထိုင်လုပ်ကိုင် စားသောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကို ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(မှန်ပါသည်၊ တိုင်းပြည်အေးချမ်းမှုရှိရပါမည်၊ ထိုမျှမက ကိုယ့်ကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တည်းခွင့်ပါရှိရပါမည်၊ ဘယ်ငိုးမတားကမှ ပြည်သူကို တို့ကစေတနာနဲ့ လုပ်တာ၊ တို့လုပ်သလိုငြိမ်နေဟု ပြောခွင့်မရှိပါ၊ )
၃။ မိမိတို့နိုင်ငံအနေဖြင့် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများကြောင့် တိုင်းပြည် မတည်မငြိမ် ဖြစ်ခဲ့ရပြီး အဖက်ဖက်မှ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုများ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မျက်နှာပျက်စရာများကို မိမိတို့နိုင်ငံအနေဖြင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(အင်မတန်မှန်ပါသည်၊ အထူးသဖြင့် တိုင်းပြည်အာဏာကို လုယူထားသော အစိုးရကိုယ်တိုင်မှ အေးချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသောပြည်သူများအား ပစ်ခတ်ခြင်း၊ မီးလောင်ဗုံးဖြင့်ထုခြင်း၊ လယ်သူမကြီးခေါင်းကို သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ရှက်တတ်လျှင် မျက်နှာဖေါ်စရာပင်မရှိပါ။ ပြည်သူပြည်သားတို့ကို အုပ်ချုပ်သူများကိုယ်တိုင်မှ အကြမ်းဖက်နေခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်၊ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင်မျက်နှာပျက်ရပါသည်)
၄။ ဒီမိုကရေစီစနစ် ကျင့်သုံးရာတွင် နိုင်ငံသားတိုင်းသည် လွတ်လပ်မှုနှင့်အတူ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေး တာဝန်များကိုလည်း လေးစားလိုက်နာကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(မှန်ပါသည်၊ နိုင်ငံသားများ ထိုသို့ လေးစားလိုက်နာရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ အစိုးရသည်လည်း ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ မှန်ကန်ခြင်း၊ ပြည်သူကို နှိပ်စက်မှုကင်းခြင်း၊ တာဝန်ယူရဲခြင်း၊ မျက်နှာဗြောင်မတိုက်တတ်ခြင်း၊ ပြည်သူကို ခြိမ်းခြောက်မှုကင်းခြင်းတို့ပါ လိုအပ်ပါသည်)
၅။ ယခုအခါ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို အကြောင်းပြုပြီး နေရာဒေသအချို့တွင် ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်သော ဆန္ဒပြမှုများ ပြုလုပ်နေကြပါသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျောင်းသားများ၏ စစ်မှန်သော ပညာရေးဆိုင်ရာ ဆန္ဒများကို မိမိတို့ အစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် လွှတ်တော်သို့ တင်ပြ၍ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည် များကို ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(မှန်ပါသည်၊ ဥပဒေနှင့် မညီပါသဖြင့် ဥပဒေနှင့်ညီစေရန် တိုင်းပြည်၏ အသည်းနှလုံးဖြစ်သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ဆန့်ကျင်သော လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒထုတ်ဖေါ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်တားမြစ်သော ဥပဒေများကို ဖျက်သိမ်းပေးရပါလိမ့်မည်)
၆။ ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စကို အကြောင်းပြုပြီး ဆူပူမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန် ကျောင်းသား လူငယ်များကို အသုံးချ၍ ကျောင်းသား အမည်ခံသူများ၊ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင် ဆောင်ရွက်နေသူများ၊ အားပေးအားမြောက်ပြုနေသည့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းအချို့ ပါဝင်ပတ်သက်နေ သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
(မှန်ပါသည်၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအား မြောက်ပေး၍ ရပါသဖြင့် အစိုးရလိုလားသော ဝှိုက်ကတ်မဲပေးခွင့်၊ ကုလားများအားလည်လှီးခွင့်အတွက် ဆန္ဒပြကြပါရန် ကြံ့ဖွံ့ပါတီမှ ဦးစီး၍ ကျောင်းသားများအား မြှောက်ပေးစေလိုပါသည်)
၇။ သို့ပါ၍ တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကို လိုလားကြသော ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူများ၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်များ၊ အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးတို့အတွက် မိမိတို့ အစိုးရအဖွဲ့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးကြ ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
(ယခုစာသည် ပူးပေါင်းသော စာဖြစ်ပါသည်)
Lwin Oo Hmuu Zaw
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၃ / ၂၀၁၅ )
၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၅ ရက်
၁၃၇၆ ခု၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော် ၂ ရက်
■အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိဘပြည်သူများသို့
မေတ္တာရပ်ခံ ပန်ကြားချက် ■
This entry was posted on February 6, 2015 at 12:16 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.